Ungasasaza njani iVidiyo kunye neVidiyo phakathi kwezixhobo ze-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UFrancisco Ruiz | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Ukusasaza
Isifundo esitsha esisebenzayo apho ndiza kucebisa usetyenziso oluluncedo esinokuthi ngalo ukusasazwa ngqo kwevidiyo nevidiyo phakathi kwezixhobo ze-Android.
Isisombululo esinokwabelana ngeefayile zethu zomsindo kunye nomculo kunye nabahlobo bethu kwaye ukongeza ekubeni nakho ukwenza olu luvo ukusasaza ngqo ngaphandle kwesidingo sokukhuphela iifayileIya kusinika ithuba lokuzikhuphelela ngokwasemzimbeni ezi fayile kwimemori yangaphakathi yesiphelo sethu se-Android.
Isicelo esiza kusisebenzisa kwesi sifundo siyinto endiyicebisayo kwaye ndicacisa ukusetyenziswa kwayo ngokweenkcukacha kwividiyo eqhotyoshelweyo endikushiye kuyo kanye ekuqaleni kwale migca.
Omnye Isicelo esiphendula kwigama leSilFer Kwaye ukuba umhlobo woLuntu lwe-Androidsis usicebise ngobubele kwiingxelo ze-YouTube.
1 Khuphela simahla ukuhanjiswa kwefayile kweSilFer kwiGoogle Play Store
2 Yonke into esinokuyiphumeza kunye neSilFer ye-Android
3 Kodwa ihluke njani iSilFer?
3.1 Akukho sidingo sokufaka usetyenziso kuzo zonke izixhobo
3.2 Amandla okwenza amaqela ezixhobo eziqhagamshelekileyo
3.3 Olona khetho lulungileyo kuzo zonke: Ithuba lokusasaza iaudiyo nevidiyo phakathi kwezixhobo
Khuphela simahla ukuhanjiswa kwefayile kweSilFer kwiGoogle Play Store
Yonke into esinokuyiphumeza kunye neSilFer ye-Android
IsilFer kuba Android yi ifayile yokwabelana eluncedo okanye isixhobo elungiselela ukuhanjiswa kweefayile phakathi kwezixhobo ngaphandle kokuqhagamshela intambo.
Konke oku kwenziwa ngokudityaniswa kwe-Wifi yeetheminali zethu ze-Android, ukudala inethiwekhi yeWifi okanye yeHotspot onokuthi uqhagamshele kuyo ii-Android zethu kunye nezixhobo ezahlukeneyo ezinje ngeekhompyuter zakho, ukuze zenze njalo, njengoko benditshilo ngaphambili, ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na intambo, ukuze ndikwazi ukwabelana ngeefayile ukusuka kwisiphelo esinye ukuya kwesinye ngaphandle kwendlela kwaye ngokukhawuleza kakhulu.
Yindlela esele siyazi ukubulela kwezinye usetyenziso esele ixoxiwe apha kwi-Androidsis, izicelo ezinje nge Yabelana ngayot Xiaomi Mi Drop ezenza kube lula ukuhambisa iifayile phakathi kwezixhobo ze-Android, okanye iiapps ezinje I-Airdroid ngokungathandabuzekiyo eyaziwa kakhulu ngokuhambisa iifayile phakathi kwe-Android kunye neWindows.
Kodwa ihluke njani iSilFer?
I-SilFer, ngaphandle kokwenza into enye esinokuyenza ngeXiaomi Mi Drop okanye ngeShareIt, sabelane okanye sithumele iifayile ngaphandle kwamacebo phakathi kwezixhobo ze-Android, yahlukile kwezi zicelo zimbini zibalulekileyo ngamanqaku aliqela abalulekileyo kunye nenoveli endiza kuyidlulisa ngoku ukubala:
Akukho sidingo sokufaka usetyenziso kuzo zonke izixhobo
Umahluko ophambili kwezinye izicelo ezibini endisandula ukuzikhankanya, yile I-SilFer ayifuni kufakwa kuzo zonke iitheminali esifuna ukwabelana ngayo okanye ukuhambisa iifayile phakathi kwezixhobo. Ngumthumeli okanye umamkeli kuphela onayo, iya kuba ngaphezulu ngokwaneleyo ukuba umlingo uhambe ngaphandle kwesidingo sayo nayiphi na intambo phakathi.
Amandla okwenza amaqela ezixhobo eziqhagamshelekileyo
Enye yezinto ezingafaniyo nezicelo zokudlulisa iifayile phakathi kwezixhobo esaziyo sonke, kukuba nge-SilFer siya kuba nakho ukwenza amaqela abasebenzisi abaxhumeneyo ngaxeshanye esiza kukwazi ukwabelana okanye ukuhambisa kunye nokufumana iifayile ngendlela elula kakhulu.
Olona khetho lulungileyo kuzo zonke: Ithuba lokusasaza iaudiyo nevidiyo phakathi kwezixhobo
Olona khetho lulungileyo kuzo zonke, olwahlukileyo kwaye lubonakala kakhulu ngokusetyenziswa kwesitayile, bendifuna ukushiya isiphelo kuba kukusebenza okundithandayo. NgeSilFer siya kuba nakho ukusasaza iifayile zethu zeaudiyo nevidiyo ngeetheminali ezixhumeneyo ngokusebenzisa isicelo.
Into entle kakhulu ukuba uyisebenzise phakathi kwamaqela abahlobo Esinokumamela ngayo iingoma kwaye sibukele iividiyo zeetimals zoogxa bethu ngaphandle kwesidingo esifunekayo sokukhuphela ifayile ngokwasemzimbeni kwi-Android yethu.
Oku akuthethi ukuba ukuba sinomdla wokukhuphela nayiphi na ifayile singayenza ngonqakrazo lweqhosha.
Esinye isixhobo esiza engqondweni ngolu hlobo ekuqaleni ukubanakho kwesixhobo se-Android njengomncedisi wokusingatha umculo kunye nevidiyo Ukwabelana ngokusasaza ngezixhobo ezahlukeneyo ezinxibelelana nenethiwekhi yeWifi yekhaya lethu.
Kwividiyo endikushiye kuyo kanye ekuqaleni kwale posi, Ndicacisa ngokweenkcukacha ezinkulu oku kusebenza kokugqibela kokubanakho ukwenza usasazo ngqo lweaudiyo nevidiyo phakathi kwezixhobo ze-Android, ke ndikucebisa ukuba ungaphoswa zinkcukacha zayo kuba kum ngaphandle kwamathandabuzo eyona nto isebenzayo kwesi sicelo
Ngapha koko, kuyo yonke le nto ndikuxelele yona, ndicinga ukuba iyi Isicelo esihle kakhulu sokwabelana nokuhambisa iifayile phakathi kwezixhobo ze-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungasasaza njani iAudio kunye neVidiyo phakathi kwezixhobo ze-Android
I-Fortnite isebenzisana kwakhona neMarvel kunye neAvengers: Endgame